Casharrada Jarmalka ee Bilowga
Waad salaaman tihiin asxaabta qaaliga ah. Boggeenna waxaa ku jira boqollaal casharro Jarmal ah. Waxaan u kala qaadnay casharradan markii aad codsatay. Gaar ahaan asxaab badan oo naga mid ah waxay weydiinayeen su'aalo ay ka mid yihiin "Mawduuckee ayaa bilow u ah barashada Jarmalka ayaa ka bilaabanaya", "siday u kala horreeyaan mowduucyada", "Maado noocee ah inaan baranno marka hore".
Halkaas, waxaan u abuurnay liis bilow ah si ay u bartaan Jarmalka. Kuwa hadda bilaabaya inay bartaan Jarmalka, xitaa kuwa aan aqoonin Jarmal kasta, taasi waa, kuwa Jarmalka ka baranaya xoqida, si taxaddar leh dib ugu eegaan liiskan.
Sidee loo darsi karaa liiskan? Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan ku taxnay mowduucyada soo socda annaga oo tixgelinayna saaxiibbada aan ku hadlin af Jarmal. Haddii aad raacdo amarkan, waxaad ka bilaabi doontaa barashada Jarmalka meel hoose. Waxaan kugula talineynaa inaad u aqriso mowduucyada si isku xigxiga. Ha dhaafin khadadka. Baro mowduuc kaliya hal jeer laakiin dhowr jeer. Hubso inaad sifiican ubaratay maadada aad aqrinaysid hana udhaqaaqin mowduuca xiga ilaa aad sifiican ugabarato.
Liiska hoose waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay keligood bartaan Jarmalka iyaga oo aan dhigan iskuul ama koorso. Iskuulada ama koorsooyinka luuqadaha ajnebiga ah horey ayey u leeyihiin barnaamij iyo koorso isku xigxiga oo ay hirgeliyaan. Waxaan kugula talineynaa amarka soo socda ee bilowga ah si ay u bartaan Jarmalka.
Hordhac Afka Jarmalka
Maqaallo gaar ah oo Jarmal ah
Maqaallo Madmadow leh oo Jarmal ah
Astaamaha Ereyada Jarmalka
Jarmal Jarmal ah, Ereyo jamac Jarmal ah
Foomamka Magaca Jarmalka
Magaca Jarmalka Hali Akkusativ
Sida iyo Halka Loo Adeegsado Maqaallada Jarmalka
Jarmal Jarmal Was ist das iyo Siyaabaha looga jawaabo
Aan Baro Sida Loo Sameeyo Xukunka Jarmalka
Jumlado fudud oo Jarmal ah
Tusaalooyinka Xukunka Sahlan ee Jarmalka
Jumladaha Su’aasha Jarmalka
Jirdilro Jarmal ah
Jumlado badan oo Jarmal ah
Jarmalka Waqtiga xaadirka ah - Prasens
Jarmal Jiritaan Waqti Xadgudub Fal ah
Dejinta Jumlada Waqtiga Joogtada ah ee Jarmalka
Xeerarka Tusaalaha Xiisadaha Jarmalka
Sifooyinka Jarmal iyo Ujeeddooyinka Jarmalka
Lambarada caadiga ah ee Jarmalka
Jarmalka salaan sharaf
Erayada Jarmalka Xigmad
Xeerarka Shukaansiga Jarmalka
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan aaminsanahay haddii aad bilowdo inaad ku barato casharradeena Jarmalka sida aan kor ku soo sheegnay, inaad ku imaan doontid waddo dheer waqti gaaban. Kadib barashada mowduucyo aad u tiro badan, waxaad hada ka eegi kartaa casharo kale bartayada.
Tusaale ahaan, waad ka sii wadi kartaa qaybta casharrada Jarmalka ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa horumarsan, ama haddii aad rabto inaad horumar ka gaarto xagga ku hadalka Jarmalka, waxaad ka sii socon kartaa qaybta qaababka hadalka Jarmalka ee loo adeegsado nolol maalmeedka, waxaad eegi kartaa tusaalooyin kala duwan oo wadahadal ah.
Haddii aad rabto, sidoo kale waxaa jira maqal iyo akhrin sheekooyinka Jarmal websaydhkayaga. Sheekooyinkan waxaa si gaar ah loogu codeeyay bilowga si ay u bartaan Jarmalka. Xawaaraha akhrisku aad ayuu gaabis ugu yahay fahamka ereyada, waxaana aaminsanahay in asxaabta ku barto af Jarmal heer cayiman ay awoodi doonaan inay fahmaan ereyo badan. Dhageysiga noocyadan sheekooyinka maqalka ah iyo aqrinta isla waqtigaas iyadoo la dhageysanayo ayaa waxtar weyn u leh hagaajinta Jarmalkaaga.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah boggeena sida arjiga barashada Jarmalka, imtixaanada Jarmalka, layliyo, casharo maqal Jarmal ah, casharo Jarmal ah oo fiidiyoow ah.
Maaddaama ay jiraan casharro badan oo kala duwan oo Jarmal ah oo ku yaal boggayaga oo aanan halkan ku soo koobi karin, waxaad sii wadi kartaa inaad Jarmalka ka barato nooc kasta ka dib markaad dhammayso liistada kore.
# Casharrada Jarmalka ee Bilowga
Tags: barashada alman, casharro is-jarmal ah, baro naftaada jarmalka, Casharrada Jarmalka laga bilaabo xoq, casharrada asaasiga ee asaasiga ah, Casharada Jarmalka ee bilowga ah